Chirongwa chitsva cheLufthansa cheiThemba Cape Town kuti chisimukire
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Zimbabwe Breaking News » Chirongwa chitsva cheLufthansa cheiThemba Cape Town kuti chisimukire
African Tourism Bhodhi • Airlines • nhandare yendege • avhiyesheni • Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Kuputsa Kufamba Nhau • dzidzo • Kodzero Dzevanhu • Investments • nhau • vanhu • Kutarisirwa • Zimbabwe Breaking News • ushanyi • kutakura • Kufamba Wire Nhau
Chirongwa chitsva cheLufthansa cheiThemba Cape Town kuti chisimukire.
Kubva 2019, mubatanidzwa wakasimba wemubatanidzwa wekubatsira, Mastercard uye "RTL - Isu tinobatsira vana" yanga ichibatana nemukurumbira mutsigiri Beatrice Egli kupa vana vanobva mutaundishipi mukana wedzidzo yemhando yepamusoro uye nekudaro kuvasunungura kubva mukuderera kwehurombo, kushaikwa kwemabasa uye. mhosva.
Mubatanidzwa wekubatsira ndiwo musimboti wekuzvipira kweLufthansa Group.
Sekambani inoshanda pasi rese uye chikamu chenharaunda yeGerman neyepasirese, Boka reLufthansa rinotora mutoro wezvinetso zvemagariro zvazvino kupfuura zviitiko zvaro zvebhizinesi.
Iyo isingabatsiri purofiti yakaganhurwa kambani inotsigira mapurojekiti akawanda pasirese ayo anopa vechidiki kunyanya kuwana dzidzo uye kuvagonesa kurarama hupenyu hwekuzvisarudzira.
batsira mubatanidzwa, sangano rinobatsira re Lufthansa Boka, uye Mastercard vari kutarisira RTL Donation Marathon yegore rino, ichaitwa musi wa18 Mbudzi na19, 2021. Vaoni vanogona kutopa kubva mangwana kuchirongwa chekubatsira pamwe chete “First-class pre-school education for children” mutaundishipi. yeCapricorn mu Cape Town, South Africa, nokudaro ndokutsigira kuvakwa kwechikoro chitsva cheiThemba.
Kubva 2019, kubatana kwakasimba kwe batsira mubatanidzwa, Mastercard uye “RTL – Tinobatsira vana” anga achishandira pamwe nemukurumbira mutsigiri Beatrice Egli kuti ape vana vemutaundishipi mukana wedzidzo yemhando yepamusoro uye nokudaro kuvasunungura kubva mukuderera kwehurombo, kushaikwa kwemabasa uye kuparwa kwemhosva. Kuti vana vadiki vagone kudzidza pamwe chete nevana vepuraimari, chirongwa chakabatana chave kuwedzerwa: nezvipo kubva kuRTL Donation Marathon yegore rino, chivakwa chitsva chechikoro chepuraimari chiri kuzovakwawo panzvimbo. pachikoro cheThemba primary.
“Nechirongwa chedu, tinoda kuunza tariro (“iThemba” muZulu) muupenyu hwevana – kuburikidza nekuwaniswa dzidzo yemhando yepamusoro yevana vadiki mutaundishipi. Kudiwa kwenzvimbo dzepre-school kwakakwira zvikuru ikoko, ndosaka pre-school panzvimbo iripo yatosvika pakureba kwayo. Nerutsigiro rwe "RTL - Isu tinobatsira vana" neMastercard, zvinogoneka kuvaka chivakwa chitsva chekireshi uye nekudaro kuita kuti dzidzo yepakutanga igoneke kune vanokwana zana nemakumi mana evana vanotambura," anodaro Susanne French, Lufthansa Purser, anobatsira mubatanidzwa wemazano bhodhi. nhengo uye anozvipira iThemba project coordinator.
Peter Bakenecker, Mutungamiriri weCentral Europe kuMastercard, ari kutarisirawo chiitiko chinotevera chakabatana uye anofara kuti kuwedzera kwechikoro chepuraimari, kwakatangwa muna 2019, kwakapedzwa zvinobudirira zhizha rino kunyangwe zvirambidzo zveCorona: basa rekuvaka pachikoro cheiThemba Primary School rakapedzwa nenguva zvisinei nekuoma kwemamiriro ezvinhu anoratidza mafambisirwo ari kuitwa dhiraivha nesimba pabasa iri. Isu tose tinonyanya kufara kuramba tiri chikamu chechirongwa chekubatana uye nekudaro kugadzira nzvimbo yekupotera uye maonero kune vadiki ”.
The iThemba education project in Cape Town chakavambwa makore 15 apfuura neThemba Pre School sekireshi nekireshi kuti ipe mikana yedzidzo kuvana vanotambura vanobva kumhuri dzinotambura. Chikoro chepre-chikoro chakagara chakanangana nemaitiro akazara uye chinodzidzisa hunyanzvi hwemagariro mukuwedzera kune Masvomhu neChirungu zvidzidzo. Upenyu hwezuva nezuva hwechikoro uye kudzidza pamwe chete zvinodzidzisa kudyidzana zvine ruremekedzo uye zvine pesvedzero yakanaka pavana nenzvimbo yavo. Euro yega yega yakapihwa muRTL Donation Marathon ichaenda kune kuzadzikiswa kwechivako chitsva chekireshi pasina kubvisirwa sendi, kuitira kuti mune ramangwana vana vechikoro chepuraimari nevepuraimari muCapricorn vagokwanisa kudzidza panzvimbo imwe chete.